Ukuhlamba iGreenwashing, intengiso "eluhlaza" | Bezzia
I-Greenwashing, inkqubo yokuthengisa "eluhlaza".
UMaria vazquez | 14/05/2022 10:00 | Iindaba
Ngaba uyayitshintsha indlela osebenzisa ngayo ukutya ukuze ulondolozeke ngakumbi? Mhlawumbi endleleni uya kuba namathandabuzo amaninzi anxulumene nobunyani bokuba iilebhile zale nto okanye loo mveliso izama ukukuthengisa. Kwaye ukuba kulula ukuba ixhoba lokuhlanjwa kohlaza.
Iinkampani azisoloko zidlala ngokufanelekileyo kwimidlalo yazo izicwangciso zokuthengisa. Olunye uphononongo lubanga ukuba yi-4,8 kuphela yeemveliso ezichazwa njenge "luhlaza" ngokwenene ziphendula kwiimpawu. Indlela yokuchonga kunye nokwenza ngokuchasene nokuhlaza?
1 Yintoni iGreenwashing?
2 Ungayibhaqa njani?
2.1 Xela ubuqhophololo
Masiqale ekuqaleni. Yintoni igreenwashing? Ngamafutshane, sinokuthi yi-a ukuthengisa intengiso eluhlaza emiselwe ukwenza umfanekiso ongekho ngqiqweni woxanduva lwendalo, ukuthatha ithuba lokuba sesichengeni kunye nokuziphatha okuhle kwabantu abakhetha ukusebenzisa ezi nkonzo okanye iimveliso.
Igama elivela kwisiNgesi esiluhlaza (luhlaza) kunye nokuhlamba (ukuhlamba), asinto intsha. Ngokutsho kwe-Encyclopedia of Corporate Social Responsibility, yayiyi isazi ngendalo esingqongileyo uJay Westerveld owaqamba eli gama kwisincoko 1986, emva koko ubhekisele kushishino lwehotele.
Ikwabizwa ngokuba yi-eco whitening, i-ecological washing okanye i-eco imposture, i-greenwashing balahlekise uluntu, igxininisa iziqinisekiso zokusingqongileyo zenkampani, umntu okanye imveliso xa ezi zinto zingabalulekanga okanye zingenasiseko.
Lo mkhuba ombi iinkampani ezininzi zibhenela kuyo namhlanje ukuze zihlambulule umfanekiso wazo kwaye zifumane abathengi zineziphumo ezibalulekileyo ezinefuthe elibi kumthengi, imarike kwaye, ngokuqinisekileyo, nokusingqongileyo.
kukhokelela kwiimpazamo zokuqonda kumthengi kwaye bathathe ithuba lomnqweno womthengi wokwakha inkcubeko yokusingqongileyo elungileyo.
Ayinakwenzeka kuphela inzuzo ebhengeziweyo, kodwa yenza impembelelo enkuluokanye ngokunyusa ukusetyenziswa.
Kuyingozi kwezinye iinkampani, kuba kukhokelela kukhuphiswano olungafanelekanga, engahambelani noxanduva lwentlalo yoluntu.
Ukuze ugweme i-greenwashing, kufuneka ukwazi ukuba ungayichonga njani. Zeziphi izicwangciso-qhinga ezisetyenziswa ziinkampani ukuvelisa le mbono yoxanduva lwendalo okanye uzinzo? Ukuzazi kuya kusinceda ukuba sinikele ingqalelo ngakumbi kwaye siyiphaphele imiyalezo ethile.
Lumkela "indalo", "100% eco" kunye "bi(o)". Ukuba imveliso igxininisa ezi ntlobo zamabango kwaye ayihambi kunye nengcaciso ecacileyo, rhanela. Xa imveliso iyinto ephilayo ngokwenene, ayilibazisi ukunika iinkcukacha ezicacileyo nezicacileyo malunga nezithako zayo kunye neendlela zokuvelisa.
Kulumkele ulwimi olungacacanga. Esinye isicwangciso esiqhelekileyo kukwazisa amagama okanye amagama abhekiselele kwiinzuzo ezizinzileyo okanye ezisingqongileyo kodwa ngaphandle kwengcamango ecacileyo okanye isiseko.
Ungavumeli umbala ukhohlise: Ukubhena okuluhlaza kwiileyibhile zabo kuqhelekile kwezo nkampani ezifuna ukukukholisa ngobudlelwane babo nokuzinza kunye nokunyamekela kokusingqongileyo. Ngokuqinisekileyo, ngenxa yokuba imveliso isebenzisa umbala oluhlaza akufanele ucinge ngoku ukuba kukho inkohliso, kodwa akwanelanga ukuyikhetha.
Hayi ukuxhasa unobangela oluhlaza Iluhlaza. Akwanelanga nokuba inkampani ixhasa umbutho olwela okusingqongileyo ukuqinisekisa ukuba imveliso yenkampani okanye inkqubo yemveliso injalo.
Nje ukuba amacebo aphambili aziwa, eyona ndlela ingcono yokuphepha ukuwela ekukhohliseni funda iileyibhile ngononophelo kwaye ucande ukubunjwa kwemveliso. Kuthekani ukuba ulwazi esilukhangelayo alukho kwileyibhile? Emva koko unokukhangela kwiwebhusayithi yabo. Yiba nokukrokra ukuba akukho nalapho; ukunqongophala kolwazi olucacileyo noluchanekileyo ludla ngokuba ngunobangela wokulumkisa.
Xa ufunda iilebhile kuya kuba luncedo olukhulu ukwazi izatifikethi zomntu wesithathu engabandakanyekanga. Ayizizo zonke izitampu ezinexabiso elifanayo; khangela abo banikezela ngeziqinisekiso kwinqanaba laseSpain kunye neYurophu. Sesithethile ke eBheziya malunga nayo iziqinisekiso zempahla kwaye sithembisa ukwenza njalo ngaphambi kwezinye ii-Ecolabels zaseYurophu eziqinisekisa impembelelo elinganiselweyo kokusingqongileyo.
Ukuqinisekiswa kwendwangu eyomeleleyo ekufuneka uyazi
Xa uthe wabubhaqa ubuqhophololo, musa ukubuqambela, buxele! Ungayenza ngeintanethi zentlalo, ngaphakathi kwenkampani enye kwaye ngokuqinisekileyo njengomthengi kwenye ye imibutho yokukhusela abathengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » I-Greenwashing, inkqubo yokuthengisa "eluhlaza".
Indlela yokufundisa umntwana wakho ukuba asele kwikomityi
Imingxuma yomlilo yangaphandle ukunika ukufudumala kwipatio yakho okanye igadi